मनीग्रामबाट पैसा पठाउँदा र पाउँदा उपहार नै उपहार
काठमाडौं, २६ भदौ । मनीग्राम आफ्ना ग्राहकहरुको चाडपर्वलाई १० गुणा बढी रोमाञ्चक बनाउन तयार भएको छ । कम्पनीले दशै तिहारको उपलक्ष्यमा मनिग्रामले नौलो र आकर्षक योजना ल्याएको र यसले यो महान चाडलाई १० गुणा ...
देवः विकास बैंकको डेपुटी कार्यकारी प्रमुखमा नरेश सिंह बोहोरा नियुक्त
काठमाण्डौ । देवः विकास बैंकको डेपुटी कार्यकारी प्रमुखमा नरेश सिंह बोहोरा नियुक्त भएका छन् । बोहारा विगत १५ वर्ष भन्दा बढी समय देखि बैकिंग क्षेत्रमा कार्यरत छन् । देवःबिकास बैंकमा आवद्ध हुनु भन्दा...
नेपाल राष्ट्र बैंकले भन्यो – दशै लाग्यो नयाँ नोट लिन आउनुस् !
काठमाडौ, २४ भदौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बडा दशैंका २०७३ का लागि असोज १६ गतेबाट सर्वसाधारणलाई नयाँ नोट वितरण गर्ने भएको छ । असोज ९ गतेदेखि १४ गतेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नयाँ नोट उपलब्ध गरा...
सिद्धार्थ बैंकद्धारा सिद्धार्थ प्रिमियम र सिद्धाथ ‘अवकाश मुद्दती खाता’ संचालन
काठमाडौं, २३ भदौ । ग्राहकहरुलाई निक्षेपमा आकर्षक प्रतिफल प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ सिद्धार्थ बैंकले सिद्धार्थ अवकाश मुद्दती खाता र सिद्धार्थ प्रिमियम मुद्दती खाता नामक दुई नयाँ मुद्दती खाता सञ्चालनम...
नेप्से घट्यो, एक अर्ब ५० करोडको सेयर बिक्री, कुन कति नाफा नामसहित
काठमाडौं, २३ भदौ । आज नेप्से एक दसमलव ७८ अंंकले घटेर १८ सय २३ दसमलव पाँच अंकमा कायम रहेको छ । नेप्से सेन्सिटिभ पनि तीन शुन्य दसमलव ६२ अंकले घटेर तीन सय ९५ दसमलव ५७ अंकमा कायम रहेको छ । कुल एक सय ५...
हिमालयन बैंकलाई TFP अवार्ड २०१६ लिडिंन्ग पार्टनर बैंक इन नेपाल प्रदान
काठमाडौ । एशियाली विकास बैंक (ए.डि.बि.) ले हिमालयन बैंक लिमिटेडलाई TFP अवार्ड २०१६ लिडिंन्ग पार्टनर बैंक इन नेपाल प्रदान गरेको छ । सेप्टेम्बर ७, २०१६ मा सिंगापुरमा आयोजित एडिबि ट्रेड फाईनान्स प्रोग...
एक अर्ब रुपैयाँको नविल ईक्विटी फन्डको बिक्री खुल्ने
काठमाडौं, भदौ २३ । कोष प्रर्वधक नविल बैक रहेको एक अर्ब रुपैयाँको म्युुचअल फन्डको बिक्री खुल्ला हुने भएको छ । असोज दुुई गतेबाट नविल ईक्विटी फन्डको प्रति युनिट १० रुपैयाँ अंकित मुल्य कायम रहने गरी १...
गोर्खा फाईनान्सको एटिएम न्यूरोड र सातदोबाटोमा
काठमाडौ, भदौ २१ । गोर्खाज फाईनान्सले काठमाडौको न्यूरोड शाखा तथा ललितपुरको सातदोवाटो शाखामा एटीएम सेवा विस्तार गरेको छ । फाईनान्सले आफ्ना ग्राहक तथा सर्वसाधारणहरुलाई सर्वसुलभ बैकिङ सेवा उपलब्ध गराउने...